3.20.20 MCS COVID-19 Dzokorora – Mason City Zvikoro COVID-19 Makavakuru
3.20.20 MCS COVID-19 Dzokorora
Isu tinofara kugovera chitsva MCS Covid-19 mcshub yakanyatsogadzirirwa Mason City Zvikoro 'COVID-19 mhinduro, zviwanikwa, uye zvinyorwa. Munguva Yekupwanya Kwemvura, tinenge tisiri kupa mazuva ese kutaurirana, saka inzwa kukurudzirwa kuti uongorore saiti ino kana uchikanganisa zvatagara tichiita. Sezvo zuro pa 3:30 pm, hapana mhosva dzakasimbiswa dzeCOVID-19 muMason City Zvikoro, uye 119 akasimbisa nyaya muOhio. Pazasi pane mhinduro kumibvunzo yakajairika kubva kumhuri dzedu nenharaunda.
Tarisa vhidhiyo iyi ya Superintendent Jonathan Cooper kugovera maitiro iyo Cooper Mhuri ichave ichiedza kusunungura pamusoro peShuwa Break.
Chii chinofanira kutarisira mhuri mushure meShuwa Break (3.23.20-3.27.20) zvapera?
Hezvino izvo zvinoita Remote yedu Yekudzidza Chirongwa mumavhiki anotevera.
Kurume 23-27 – Kupwanya Kwemhepo. Hapana chikoro chinotarisirwa. Unogona kushandisa zviwanikwa kubva MCS Kudzidza Momentum saiti kuwedzera mikana yekudzidza yakawedzera yevana vako.
Kurume 30 – Kubvumbi 3 – Vadzidzisi vanoramba vachironga uye vanotanga kuyedza Remote Kudzidza Zvakaitika. Kutanga neChina, Kubvumbi 2nd, vadzidzi vanowana zvishandiso zvekudzidza kure nekuita nezvidzidzo zvisina kuvanzika izvo zvinoongorora kana kupfumisa zvakambodzidziswa kare. Izvi zvichabatsira kuona kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka usati wazadzisa zvizere zvidzidzo zvitsva.
Kubvumbi 6 zvichidarika – Kubva paruzivo kubva kuvatungamiriri venyika uye nyanzvi dzehutano hweveruzhinji, tinotenda kuti rairo yekukurumidzira yeOhio kuvhara zvikoro inogona kuwedzeredzwa kupfuura Kubvumbi 5. Munguva ino, vadzidzisi nevadzidzi vanozoita kudzidza kutsva vachishandisa yedu Remote Kudzidza Zvakaitika muenzaniso, nemhuri dzinopa rutsigiro kumba. Ichi chidzidzo chitsva chinoongororwa uye kukoshwa.
Ndingaite sei kubatsira mwana wangu kuti adzikame iye akamira pamba?
Edza kuchengetedza hurongwa hwakajairika nekusarudza nguva yebasa uye nekupwanya nguva zuva rese. Buda www.GoNoodle.com yevadzidzi vezera rekutanga (akasiyana mavhidhiyo mapfupi kunyaradza uye kuita simba). Vepakati uye vepamusoro vadzidzi vechikoro vanogona kuwana online zviwanikwa zvinosanganisira kufema zvakadzika uye kutungamirirwa kuzorora kwemaitiro, mindfulness uye kufungisisa maitiro, uye inofambira mberi yekuzorora kwemassage.
Teerera kumumhanzi unozorodza uye pinda MCS Pfungwa Dzemumhanzi pa: kuchechina.org/learn, Pasiwedhi: mindfulmason
Donate blood: Help save lives by giving blood. Tiri pakati pekushomeka kweropa renyika kwakaunzwa nekubuda kweCOVID19. Hoxworth Ropa Center inoda vese vanopa ropa vanokodzera kuti varonge mupiro pakutanga kwako nyore. Sechiyeuchidzo, Kupa kweropa kwakachengeteka, maitiro asina hutachiona uye hapana njodzi yekubatwa nehutachiona na kupa ropa.
Mhuri Dzinodiwa: Kana iwe uchida kubatsira kutsigira mhuri dzinoda, funga kupa kune Nzvimbo yaJoshua kana kuti Comet Cupboard. Vabereki veMason vanogona kupa mari mune www.namndong.com/Mason/login.aspx. Tarisa pasi peMabasa e Comet Cupboard ME / MI. Iwe kana usina EZPay account, unogona kutumira mipiro kuMason City Zvikoro - Comet Cupboard, 211 N. East Street, Mason, Ohio 45040.
Ndatenda nerutsigiro rwenyu rwakaenderera.